Ebu Design & Manufacturing - Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd.
Ebu imewe otu bụ isi nke Rubber & Plastic technology, niile nke Ebu nke roba akụkụ & silicone akụkụ na-mmemme na e site ebu imewe otu, anyị nwere ike inyere gị dozie a dịgasị iche iche nke nsogbu nke Ebu ma ọ bụrụ na ị na-ewetara anyị roba ma ọ bụ ọrụ plastik. Isi nke ebu imewe:
Kacha ebu ebu na-aghọta elu-arụmọrụ mmepụta.
Debe ihe achọrọ nke eserese ahụ, njikwa nnabata siri ike.
Ọ dịghị flash-akara na mkpa na-ebupụta nke roba akụkụ ma ọ bụ silicone akụkụ.
Ebu ebu na ndụ ebu.
Pụtara iche akpụzi nhazi Technology:
Chengda Rubber & Plastic ọkà technicians nwere pụtara ìhè technology nke ebu ationgha na ezi raara onwe ha nye àgwà, na bụ ya mere na anyị na-kacha mma na omenala roba ngwaahịa na omenala silicone ngwaahịa n'ichepụta ubi.
Imirikiti ndị ọkachamara na ndị ọrụ na-eje ozi na Chengda Rubber & Plastic ruo ọtụtụ afọ ma nwee ahụmịhe bara ụba na ịkpụzi ebu, anyị na-elekọta obere nkọwa niile na nhazi, iji hụ na ị na-emepụta ngwa ngwa na ogologo ndụ maka roba ma ọ bụ ngwaahịa ngwaahịa plastik.